Xigasho: Erayo kulul oo la isweydaarsaday kulankii shalay dhexmaray wakiilka Qatar iyo musharixiinta - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Waxaan xogta ka helnay waxyaabihii looga hadlay ee xalay looga hadlay go’aankii hoteelka ee u dhaxeeyay musharixiinta mucaaradka ururada iyo wakiilka gaarka ah ee wasaarada arimaha dibada Dr. Qatar Mutlaq Al-Qahtani.
Iyada oo looga dan leeyahay arrimaha siyaasadda, doorashooyinka gaarka ah iyo taageerada, Qatar waxay la taagan tahay madaxweynaha xilkeedkiisu Maxamed iyo Taliyaha NISA Fahad Yasin, musharixiintooda waxay ka soo qeyb galeen Xasan, Xildhibaan Cali Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Kheyre iyo Warsame Warsame.
Musharaxiinta ayaa u sheegay Mutlaq Al-Qahtani in taageerada indha la’aanta ah ee dowlada Qatar ay u fidisay Farmaajo iyo Fahad afartii sano ee la soo dhaafay ay waxyeelo u geysatay shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay dhaawac weyn u geysatay geedi socodkii dowlad dhisida Soomaaliya.
Intii uu socday kulanka, musharixiinta waxay sidoo kale ku eedeeyeen Qadar iyo Turkiga inay adeegsadeen hub iyo gaadiid ay ugu deeqeen ciidamada Soomaaliya Farmaajo si loo caburiyo shacabka isla markaana la weeraro madaxweynayaashii hore iyo kuwii banaanbaxayay.
C / raxmaan C / shakuur ayaa sidoo kale ka sheegay kulankii shalay in weerarkii lagu qaaday gurigiisa 17-kii December uu si gaar ah looga shakiyay ku lug lahaanshaha Qatar, sida ay sheegeen ilo wareedyo.
Musharaxiinta ayaa u sheegay Mutlaq Al-Qahtani in dhaqaalaha dowlada Qatar ay siiso Farmaajo iyo Fahad loo adeegsaday duminta dowlad goboleedyada dalka, laaluushka xildhibaanada iyo iibsashada saraakiisha sarsare ee militariga iyo qandaraasyo lala yeesho ololeeyayaasha Mareykanka si loo wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya maamulkii hore ee Farmaajo. Madaxweyne Trump.
Waxaa lagu booriyay inay raali galin ka bixiyaan dadka Soomaaliyeed xadgudubyada iyo inay qaadaan talaabo cad oo muujineysa sida aysan ugu qanacsaneyn taageerada Farmaajo.
Wakiilka Qatar, Mutlaq Al-Qahtani, wuxuu dalbaday in xalka laga helo midowga musharixiinta, taasoo soo celinaysa kalsoonida siyaasiyiinta. Ka guur, ka bax Vilada ama ku wareeji amniga guud ee dalka oo faro-geli arrimaha dalka.
Musharaxiinta ayaa sidoo kale wakiilka la wadaagay in dowladiisu ay kala shaqeyn doonto R / wasaare Rooble sidii dalka looga qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah sida ugu dhaqsiyaha badan.
Telefishinka ayaa iska difaacay asaga oo sheegay in dowladiisa Qatar aysan taageerin shaqsiyaad balse ay taageerto dowlada Soomaaliya isla markaana ay farriin adag ugasoo direen Farmaajo kana yimaadeen Mareykanka.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu daneynayo xal u helida khilaafka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya wuxuuna la kulmi doonaa madaxweynaha Kenya si uu u gaarsiiyo fariin gaar ah amiirka.
Dowlada Qadar ayaa hada umuuqata inay kala noqotay taageeradii ay siineysay Maxamed C / llahi Farmaajo waxayna dooneysaa isbaheysi cusub oo siyaasadeed.
Abdiwahab Ahmed 1014 posts